Nhau - About Baolai
Zhejiang Baolai Boka Co, Ltd. chihombe-chihombe chakavanzika bhizimusi rekusanganisa magirazi ekugadzira, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa, uye kupinza uye kutumira kunze kwezvinhu. Kambani yedu ine mafekitori matatu munzvimbo dzepamusoro dzemhuri, 2 zvitoro mukati meguta rekutengeserana, kambani yekutengeserana yekunze, uye makuru echitatu-bato rezvitoro mapuratifomu murwizi. Nemakore makumi mapfumbamwe nemakore ekuziva mumagirazi ekugadzira, isu takabatanidza angangoita zana magirazi mafekitori uye zvigadzirwa mafekitori ekushandira pamwe. Iyo fekitori iri muLinhai, Taizhou, Zhejiang, iyo hombe Optical yekugadzira hwaro munyika. Chitoro nekambani yekutengeserana yekune dzimwe nyika iri munzvimbo yepasirese yekuparadzira zvigadzirwa-Yiwu, China. Makambani makuru epasi rese anoshanda pamwe nekambani yedu anosanganisira: Coca-Cola, Unilever, Wal-Mart, Disney, Lipton, Ford, nezvimwe…. Iyo kambani inotora hunyanzvi hwehunyanzvi seye mutungamiri, hunyanzvi seiri mutemo, uye akasiyana siyana anozivikanwa ekushambadzira ekunze maturusi sekubatsira. Uye ine mukana wemubatanidzwa mukubatana nemafekitori mazana matanhatu mumaindasitiri akafanana, akasanganiswa neyedu zvinyorwa zvinyorwa dhipatimendi, kupa vatengi vepasirese zvigadzirwa zvakagadzikana zvemhando yepamusoro, zvichitungamira indasitiri nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo inonzwisisika.
Iyo kambani yakagara yakanamatira kune "vanhu-vanotungamira" pfungwa uye inoremekedza munhu wese akazvimiririra, kusanganisira vatengi, vashandi, vanobatirana, vatengesi uye vemagariro mapoka. Kubva pane "kutendeseka" uye "kuvimba" kwechinangwa, isu tiri kutsvaga kugona, kugara tichivandudza nekuvandudza, uye isu tiri kugara tichishanda nesimba kuti rufaro rwevashandi vekambani uye zvido zvevatengi nevatengesi.
Zvichienderana nechinangwa chekuvaka hombe yemakambani brand, isu tine chivimbo chekuenda kuruzhinji mukati memakore mashanu, uye tinosimbirira mukusimudzira uye kwenguva refu-kusimudzira. Panguva imwecheteyo, tinovimba nevanhu vane simba, yakaoma manejimendi manejimendi yekugadzira uye huzivi hwebhizinesi, kuburikidza nekuunganidza ruzivo rwedu uye kutsvaga kusingazungunuke uye kugadzirisa ramangwana, Kuzvipira kuve mutungamiri muindastiri indasitiri muChina nepasirese !